Maxaan Ku Sameeyaa Lacagtayda? 10 Fursado Maalgashi oo Cusub
Bogga ugu weyn Maxaan Ku Sameeyaa Lacagtayda? 10 Fursado Maalgashi oo Cusub sanadka 2022
Su'aashu weli way taagan tahay, maxaan ku sameeyaa lacagtaada?
Jawaabtu asal ahaan waa farqiga u dhexeeya kuwa xoolo urursaday iyo tujaarta.
Waa ku habboon tahay in lacag sidan loogu fikiro maxaa yeelay waxay ku siinaysaa aragti ficillada hagaajin kara caafimaadkaaga maaliyadeed.
Natiijo ahaan, maqaalkani wuxuu noqon doonaa mid waji-waji leh, taasoo micnaheedu yahay in fursadaha maalgashi ee lacagtaada laga wada hadli doono iyo sidoo kale ikhtiyaarrada wixii lacag lagu samayn lahaa.
Tani waxay ballanqaadeysaa inay tahay qayb waxbarid ah. Isu diyaari, waxaa laga yaabaa inay ka dheeraato sidii caadiga ahayd.
Maxaan Ku Sameeyaa Lacag?
Halkaan waxaa ah xulashooyinka ugu fiican sida loo isticmaalo magacaaga.
Aynu dhex galno mid kasta oo ka mid ah aagaggaan oo aan aragno tallaabooyinka aad qaadi karto si aad ugu dhaqan geliso nolol maalmeedkaaga.
Dadka intooda badan, mar kasta oo la soo hadal qaado waxa lagu sameeyo lacag, fikirka ugu horreeya wuxuu u eg yahay inuu qarash gareeyo.
Tani waa mid la fahmi karo sababtoo ah waxaan ku nool nahay bulsho macaamil-wadato. Intaad lacagtaada ku bixinayso, waxaad sidoo kale ku luminaysaa kharash aad u badan kharashyada qarsoon sida canshuurta iibka iyo xitaa fursadda maalgashi ee la seegay.
Waa hagaag, qof waa inuu dhaqaajiyaa dhaqaalaha, markaa, maxaad adiga u tahay!
Akhri: Sida Loo Joojiyo Kharashaadka Lacagta: 10 Caadadood Waa inaad Hadda Joojisaa
Kaydinta lacagtu waa hubaal inay ka fiican tahay kharashaadkeeda.
Kaydintu waa tallaabada ugu horreysa ee dhisidda hantida. Si kastaba ha ahaatee, dhibaatadu waxay tahay inaadan taajir ku noqon karin kaydinta. Waxaad u baahan tahay inaad ka faa'idaysato awoodda maaliyadahaaga kaydsan si aad u maalgashato.
Si aad si firfircoon u kaydsato, ku rid lacagtaada koontada hubinta, koontada kaydka, ama akoon kale oo khatar yar. Lacagtaadu waxay ahaan doontaa mid badbaado leh, in kasta oo ay tahay uun fadhi-la'aan, oo aan kuu shaqaynayn.
Akhri: 10 Siyaabood Oo Fudud Oo Lacag Loogu Kaydsan Karo Miisaaniyad Adag Sannadkan
Halkaas ayay ka bilaabataa hanti-dhisidda.
Maalgashigu wuxuu ku shaqeeyaa dulsaar isku dhafan, halkaas oo lacagtaada sii kordheysa ay sii waddo kasbashada dulsaarka iyo kororka.
Maalgashigu wuxuu leeyahay fursado badan. Waxaad ka bilaabi kartaa kuwa fudud sida saamiyada, curaarta, ETF -yada, Maaliyadaha Tusaha, iwm. Kuwa kale ee aan runtii jeclahay waxay maalgelinayaan hantida maguurtada ah waxayna bilaabayaan ganacsi kuu gaar ah.
#4. KA BIXI
Uma baahnid inaad noqoto bilyaneer si aad ugu tabarucdo samafalka. Sadaqadu waa hab fiican oo dib loogu celiyo kuwa nasiibka yar. Kani waa hab fiican oo lagu kharash gareeyo lacagtaada, waa sabab wanaagsan.
Halkaan waxaa ah qarsoodi, tabarucaadka samafalka waa canshuur la'aan. Markaa run ahaantii way ku anfacaysaa inaad wanaag samayso!
Raadi samafal oo ka dhig mid ku habboon inaad ku deeqdo sannad walba. Qasab ma aha in ay noqoto mid aad u badan, laakiin waxaa wanaagsan in aad caadaysato.
Tani waa hal fikrad oo aad dhab ahaan ikhtiyaar u leedahay.
Adigu ma lihid ikhtiyaar ah inaadan bixin canshuur, laakiin waxaad yareyn kartaa xaddiga aad bixiso adoo ka faa'iideysanaya xeerarka canshuuraha iyo ka -dhaafitaannada.
Xusuusnow, canshuurta oo laga leexdo waxay kaa dhigi doontaa inaad bixiso wax ka badan intii loo baahnaa.
Waxaad ku baran kartaa xeeladaha canshuuraha qaarkood ama waxaad kiraysan kartaa xirfadle canshuureed oo u qalma si lagaaga caawiyo yareynta culeyska canshuurtaada.
Akhri: 10 Dariiqo oo ku Saabsan Sida Loo Bixiyo Canshuur Yar 2022 | Sirta Gudaha
Fursadaha Maalgelinta Cusub ee 2022
Xeeladda ugu wanaagsan ee lagu maalgelinayo dhisidda faylalka kala duwan ee maalgashiyada khatarta hoose leh. Dooro hantida saxda ah oo qorshe yeelo.
Kuwani waa 10 ikhtiyaar oo maalgashi oo aad ka faa'iideysan karto.
1. Dhaqaalaha labada dhinac
Waxaa ugu wanaagsan in la bilaabo maalgashiga lacag is halkii uu ka ahaan lahaa kaydka shaqsiyadeed ama curaarta. Marka hore sababta oo ah waxaad waayo -aragnimo u weyday, tan labaad, waxay awood u siineysaa maalgashi ballaarinta ballaadhan ee kaydka iyo curaarta hal macaamil halkii aad ka iibsan lahayd dhammaantood.
Waa maxay dhab ahaantii sanduuqa wadaagga ah?
Sanduuqa wadaagga ah waa nooc ka mid ah maalgashi si xirfadeysan loo maareeyo oo lacagtaada kula dara maalgashadayaasha kale. Maamulayaasha sanduuqa ayaa markaa isticmaala lacagta la ururshay si ay kooxda ugu iibsadaan dammaanad.
Waa ikhtiyaarro maalgashi oo ammaan ah iyo sidoo kale kuwo aan qaali ahayn. Waxaad bixin doontaa hal guddi ganacsi oo keliya ama waxba maahan marka laga reebo bixinta guddiyada ganacsiga si aad u iibsato daraasiin ama ka badan oo saamiyo kala duwan ah.
Kani waa ikhtiyaarka ugu horreeya ee ka jawaabaya wixii aad ku samayn lahayd lacag.
Curaarta waxay ku timaadaa qaab shirkadeed, degmo, iyo curaarta khasnadaha.
Waxay yihiin dammaanad deyn oo kor u qaada raasumaalka dadka kale. Waxay maalgeliyaan shirkado cusub, mashaariic maxalli ah, iyo xataa dawladda. In kasta oo aysan jirin wax maalgashi ah oo aan khatar lahayn, haddana curaarta dawladda (T-Bonds) ayaa aad ugu dhow inta aad heli karto.
Curaarta mudan waa maalgashi kale oo mudan. Waxay ku kacayaan midkiiba $ 10 waxayna bixiyaan qiime go'an oo soo noqosho ah 5%. Boondh kasta wuxuu leeyahay muddo 36 bilood ah waxaana dulsaarka la bixiyaa toddobaadle. Lacag kaash ah mar kasta oo aad jeceshahay xitaa ka hor qaan -gaarnimada weligeedna ma bixin doontid ciqaab.
Lacagta aad ku maalgeliso Bonds Worthy waxaa loo isticmaalaa in lagu maalgeliyo meheradaha Ameerika waxayna Worthy soo xulataa meheradaha ay amaahiyaan. Waxay kaliya maalgashadaan shirkadaha hantidooda dareeraha ahi aad uga badan tahay xaddiga amaahda; taas oo ka dhigaysa halista mid aad u hooseysa si aad ugu soo noqoto 5%.
Tani waa maalgashiga labaad ee ay tahay inaad ku samayso lacag.
Maxaa kale oo aad ku samayn kartaa lacagta? Maalgelinta jidka Robo-la taliyaha. La-taliyayaasha maaliyadeed waxay isticmaalaan algorithm-kan si ay ku siiyaan talada ugu fiican ee ku saabsan maalgelinta maaliyadeed.
La-taliyayaasha Robo waxay ka dhigaan maalgashiga mid la heli karo qof walba. Barnaamijyadan ayaa ka sahlan oo ka jaban la -taliyaha maaliyadeed ee caadiga ah.
Waxaa jira la-taliyeyaal Robo-ga weyn oo halkaas jooga waxaanan soo diyaarinnay liiska kuwa aan ugu jecelnahay iyo cidda ay ku habboon yihiin.
Intee in le'eg ayay tahay inaan maalgashado?
Xagee baan maalgashanayaa?
Bilow: In ka yar $ 500 in la maalgashado Fiicnaan
Dhexdhexaad: In ka badan $ 500 si loo maalgashado Wealthfront
Heer sare: In ka badan $ 1,000 si loo maalgashado M1
Uma baahnid maalgashi bilow ah si aad u furato koonto. Lacagta sanadlaha ah waa 0.25% sanad walba.
Iyada oo la hagaajiyo, waxaad ku maalgelin kartaa kaydka iyo ETF -yada kumanaan shirkadood. Waxay ku siinaysaa faylalka tacliimeed ee la habeeyay oo ku saleysan doorbidkaaga iyo dulqaadka halista.
Wealthfront waxay u baahan tahay $ 500 maalgelin bilow ah si ay u furato koonto. Ilaa maalgalintaadu gaarto wadar dhan $ 10,000, ma jiraan wax khidmad ah oo aad bixin doonto gabi ahaanba.
Mar labaad, khidmadda maal -gashigu aad bay ugu tartamaysaa 0.25% sannadkii.
Si aad u maalgashato, waxaad u baahan tahay $ 100, madalku waa mid ku habboon isticmaalaha, kaas oo ah nooc isku jira la-taliye robo iyo dallaal dhaqameed.
Maaliyadda M1 waxay u sahlaysaa maalgashadayaasha cusub inay bilaabaan maxaa yeelay waxay diyaar u yihiin inay kaa caawiyaan inaad wax iibsato, mana jirto wax khidmad ah haba yaraatee xisaab furid ama ganacsi.
Vanguard Lataliyaha Dijital ah
Waxaad u baahan tahay $ 3,000 si aad u maalgashato oo aad faylalkaaga u maamusho mid ka mid ah magacyada ugu sarreeya. Lacagta la -talinta ee bartilmaameedka ahi waa qiyaastii 0.15% dheelitirkaaga, laga bilaabo $ 5,000 oo la maalgashaday, taas oo ah qiyaastii $ 7.50 sannadkii.
Haddii aadan ku darin wax ka badan 10% faylalkaaga kaydka shaqsi ilaa aad aad ugu raaxaysato waxaad samaynayso.
Suuqa saamiyada ayaa ah meel fiican oo laga bilaabo kobcinta lacagtaada. Waxaa jira dammaanad gaaban iyo mid dheer labadaba.
Miisaaniyada dammaanadda muddada-gaaban waxaa caadi ahaan maamula oo keliya la-taliye maaliyadeed oo xirfad leh. Waxay yihiin kuwo aan xasilloonayn sida suuqa lacagta laakiin waxay bixiyaan awood dakhli sare. Bixinta bil kasta waxay ku xiran tahay hadba xaaladda suuqa.
Qaar ka mid ah meheradaha wanaagsan ee lagu barto kaydka ayaa ah:
Akhri: Sida Loogu Maal Gashado Nike Stock Lacag Yar | 2022 Hagaha buuxa
#5. Hantida ma guurtada ah
Hantida maguurtada ah waa hal waddo maalgashi oo leh awood kasbasho oo sare, xitaa waxaad samayn kartaa malaayiin.
Waa maalgelin muddo dheer ah oo loogu talagalay socodka lacagta oo laga sameeyo guryaha kirada bil kasta. Tani waxay sii kordheysaa waqti ka dib marka bixinta deynta guriga ay sidiisii ​​tahay.
Sida maalgashi kasta, tixgeli halista ka hor intaadan ku dhiiran inaad noqoto hantiile.
Ka eeg Saqafka sare ama Lacag ururinta rajada suuqa hantida ma-guurtada ah.
Halkan waxa ku jira Magaalooyinka Ugu Wanaagsan In La Maalgashado Hantida Ma Guurtada Ah 2022 | Aragtida Khubarada
#6. Xisaabaadka hawlgabka
Tani waa wax kale oo lacag lagu sameeyo. Qorshayaasha hawlgabku khasab maahan maalgelin laakiin waxay bixisaa barxad lagu maalgeliyo.
Tabarucyadu waa kuwo canshuur laga jari karo iyo dakhliga maalgashiga oo dib loo dhigay. Waxay guud ahaan leedahay faa'iidooyin canshuureed. Ka mid ah qorshayaasha kale ee maalgelinta ee kor ku taxan, waxay leedahay faa'iidada canshuurta ugu fiican.
Waxa kaliya ee hoos u dhaca ayaa ah in ay jirto xad marka aad la bixi karto lacagaha.
#7. Shahaadooyinka Debaajiga (CD -yada)
CD -gu wuxuu qofka u suurta gelinayaa inuu ku shubo qadar lacag ah waqti cayiman si uu ugu beddelo soo noqosho dammaanad leh wax kasta oo ku dhaca dulsaarka muddadaas.
Hubi oo ka iibso CD-gaaga hay'ad maaliyadeed oo caymis leh FDIC maxaa yeelay ilaa $ 250k waa caymis. Muddada dheer ee maalgelinta, oo u dhaxaysa 3 bilood ilaa 5 sano, ayaa sare u kacaysa wax -soo -saarka.
Waxa xiiso leh, Bangiga CIT wuxuu bixiyaa mid ka mid ah alaabada CD -ga ugu fiican. Xitaa marka la joogo qiime tartan, ma jiro wax ciqaab ah oo ah in dib looga laabto CD-ga 11-bilood ah, haddana qiimayaashu wali waa tartamayaan.
#8. Naftaada Maalgeli
Tani waa mid ka mid ah maal -gashiga aan jeclahay, in kasta oo dadka badankiisu aysan sidaas u malayn.
Waa dhaqaaqa muddada dheer ee ugu wanaagsan ee aad qaadi karto. Waqti ka dib, waxaad kordhinaysaa fursadaha dakhli-helidda taasoo si togan u saamayn doonta hawlaha kale ee maalgashiga.
Tani waxay noqon kartaa qaab xirfadeysan ama ka -guuritaan shaqo ilaa shaqo kale. Kuma koobna shaqooyinka, waxay la macno noqon kartaa hagaajinta caafimaadkaaga, barashada maalgashiyada, iwm.
Waxaan taas u dammaanad qaadi karnaa inaan kor u qaadno tayada noloshaada.
#9. Maalgeli Ganacsi Dhinac ah
Sida laga soo xigtay IRS, waxaa jira ugu yaraan 41 milyan oo qof oo iskood u shaqeysta oo ku nool Mareykanka, kuwaas oo intooda badan ganacsigooda u maamula sidii xamaasad dhinac ah. Waad aragtaa, keligaa ma tihid!
Sameynta lacag dheeraad ah iyada oo loo marayo ganacsi dhinac ah ayaa kaa caawin kara yareynta culeyska maaliyadeed ee adiga kugu jira. Waqtiga fog, gelinta waqtigaaga iyo dadaalkaaga ganacsi dhinac ah waa inaad naftaada maal gashato.
Maaha wax dhib badan sida aad u maleyn karto, sidoo kale. Inta badan ganacsiyada dhinacyadu waxay ka bilaabmaan ama hiwaayad ama u beddelaan waxaad ka qabato shaqadaada aasaasiga ah il dakhli labaad.
Waxaan haynaa maqaal ku saabsan hustles dhinaca waxaad ku biiri kartaa si aad lacag u hesho.
Sidoo kale akhri: 19 Lacag Bixin Badan oo Loogu Jiro Aabbayaasha Walaaca Yar
#10. Bixi ama Bixi Deynta
Runtu waxay tahay, nolosha lama saadaalin karo. Sidaas darteed, ka tagista xoogaa lacag ah ma dhaawici doonto.
Bixinta ama bixinta deynta ayaa noqon doonta mid ka mid ah maalgashiyada ugu wanaagsan ee aad sameyn karto. Kaarka deynta oo leh ilaa 20% dulsaarka ayaa ku badbaadin kara haddii ay jirto halis dakhli.
Intaa waxaa dheer, bixinta kaarka amaahda oo leh dulsaar dhan 20% waxay la mid noqon doontaa ku xiritaanka 20% soo noqoshada maalgashiga dhowr sano. Tani kaliya maahan qorsheynta kuwa ugu xun laakiin u diyaargarowga kan ugu fiican.
Waxay la mid tahay dhisidda keyd lacag caddaan ah, waana faa'idadaada haddii aad isu diyaarinayso duufaan soo socota ama aad u boodayso hawl cusub oo hagaajin doonta mustaqbalkaaga.
Tani waxay caawin doontaa: Ma ka roon tahay Deynta ama Bixinta?
Waa muhiim inaad fiiro gaar ah u yeelato waxa aad ku samaynayso lacagta 2022. Waa wakhti ku dhow inaad ballan ka qaaddo wanaagga dhaqaale.
Dhammaan xulashooyinka maalgashiga ee qodobkan, waxaan kugula talineynaa kordhinta kaydka hawlgabkaaga ama bilaabista ganacsi dhinac ah. Intaa waxaa dheer, lacagta yar ee lagugu leeyahay waa mid sahlan mid kasta oo ka mid ah hawlahaas.
Xisaabaadka Maaliyadeed ee Wanaagsan
Sida Loogu Iibsado Beeraha Beeraha Maalgashiga Sanadka 2022 | Hagaha Khabiirka
Shabakadaha Talooyinka Maalgashiga ee ugu Fiican ee leh Xogta Wakhtiga
Faallooyinka Saamiyada Realty 2022 | Sharci ama Fadeexad Maalgashi Hantiyeed oo Cusub?
10 -ka Dhaqaale Ee Ugu Wanaagsan Ee Maalgashiga Sanadka 2022 | Tusaha Khubarada
Goobaha sida 123Movies: 15 Best 123Movies ee 2022
Ma waxaad ka mid tahay kuwa is-weydiinayey maxay ka dhigan tahay maalka? Nolol maalmeedkeena, ereyga…
Ma doonaysaa in aad barato sida ukumahaaga loogu rido dambiilyo kala duwan oo badbaado leh kuwaas oo tarma oo meel siiya…
Ahaanshaha maal -gashade cusub ayaa kugu cabsi gelin kara, gaar ahaan haddii aadan garanayn meel aad ka bilowdo. Nasiib wanaag, iyada oo…
Waa muhiim inaadan kaliya ku tiirsanayn dib u eegista online-ka laga helay. Hubi inaad waqti ku qaadato…
Dib -u -eegista Webull 2022: Sida ay u Shaqayso | Faa'iidooyinka & Qasaarooyinka | Khiyaano Ama Sharci
Waxaa jira goobo ganacsi oo badan oo online ah, laakiin haddii aad raadineyso…